Malunga nathi -CANABIZ HIGH CO., LTD
ICANABIZ HIGH CO., LTD ngumvelisi weglasi kunye neminyaka emi-5 kwiglasi yokuvutha. Sigxile ngokukodwa ekuthumeleni imibhobho yamanzi yeglasi eMantla Melika (eUS nase Canada) kunye ne NL. Umgangatho wobomi bethu, kwiminyaka edlulileyo, sisebenzisa kuphela iglasi ye-Borosilicate ephezulu kwaye ilungile kuyilo lwe-OEM / ODM ngonxibelelwano olugudileyo phakathi kwabaxumi bethu.
"Ukwaneliseka kwabathengi kukusukela kwethu ngokungagungqiyo", ngaphandle kwemveliso elungileyo sizama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngenkonzo elungileyo kubathengi bethu, sijongane neengxaki eziphakanyiswe ngabathengi, kunye nengxelo kwisithuba seeyure ezingama-24 ngosuku lokusebenza.
Ngaphandle kokuvuthelwa kweglasi lelona shishini lethu liphambili, sikwakha ubuhlakani obuhle kunye nomenzi we-grinder, itreyi eqengqelekayo, i-quartz banger, njl.
Ukubonelela ngenkonzo yevenkile enye yokumisa abathengi bethu kwaye sidibanise ezi zinto kunye kunye ngolunye ulwandle kunye neglasi yethu.
Sinezixhobo ezininzi zokuvelisa kwiindibano zocweyo ezintathu zemveliso, kunye nommandla opheleleyo ongaphezulu kwe-1,000 yeemitha zesikwere. Kukho ngaphezulu kwe-10 yabasebenzi abadala kwezobuchwephesha ngaphezulu kweminyaka esi-8, kwaye kukho 30-50 yabasebenzi basefektri.
indawo iyonke engaphezu kwesikwere seemitha ezili-1
ngaphezulu kwe-10 abasebenzi bezobugcisa abadala ngaphezulu kweminyaka esi-8
30-50 abasebenzi mveliso
Sinenkonzo yokubonelela epheleleyo yokuhlangabezana neemfuno zakho Kuzo zonke iimfuno zemveliso, siya kujonga ngokungqongqo umgangatho wemveliso ngaphambi kokuhanjiswa ukuze kuqinisekiswe ukuba imveliso nganye iyafaneleka. Kwangelo xesha, siza kukuthumelela umfanekiso wemveliso ukuqinisekisa ukuba imveliso ilungile ngaphambi kokuba siyithumele. Sinababoneleli beenkonzo abagqwesileyo abanokuqinisekisa ukufika kweempahla zakho ngokukhuselekileyo, kwaye siyathembisa ukuba iimpahla zakho zonakele okanye zilahlekile, siya kukubuyekeza ngokufanelekileyo. Injongo yethu kukuba ngumthengisi wexesha elide, ke sineemfuno ezingqongqo kakhulu kumgangatho, ixabiso kunye nenkonzo yeemveliso, kwangaxeshanye, siqinisekile ukuba sinokuba ngumthengisi wakho wegolide.
Sijonge ukusebenza nawe.